Shiinaha CGZ9325P-45 ° Mashiinka Waxsoosaarka Kala-beddelashada leh oo leh soosaarayaasha xakamaynta PLC iyo alaableyda | SUNKON
CGZ9325P-45 ° Mashiinka Waxyaabaha Kala Bedbeddelka Qalabka ee leh xakamaynta PLC
■CGZ9325-45 ° wuxuu ku haboon yahay shiidi karaas fidsan oo leh arris, xagal isbadal leh iyo 45 ° hareeraheeda. 5 matoorrada ka soo baxa dogobka hore ayaa hagaajin kara 0 ~ 45 ° iyo guud ahaan inay u soo guuraan ama u soo baxaan si loo gaaro hagaajinta xagalka.
■Shiidi qallafsan, shiidid wanaagsan, duubis iyo kaamil ayaa lagu dhammayn karaa hal mar.
■Saldhigga, alwaaxda hore iyo gadaal, sariiraha iyo madaxyada wax shiidaya waa qalab wax lagu rido (annealed si looga hortago qallooca), Kuwaas oo xambaari kara culeysyo waawayn isla markaana leh waxqabad xasiloon.
■Iyada oo la adeegsanayo naqshad macquul ah, iyo waxqabad sare oo sax ah, Waa qalabka ugu fiican ee wax lagu shiidi karo galaaska si loogu farsameeyo wax soo saarka ballaaran ee muraayadda farsamada, muraayadaha qalabka guryaha, qurxinta iyo muraayadda qalabka guryaha, albaabbada iyo muraayadda dhismaha.
Xajmiga Max 3000 × 3000mm
Min.Glass size 80 × 80mm
Dhumucda muraayadda 3-25mm
Xawaaraha Transmissinon 0.5-5m / daqiiqo
Qabsashada dhulka 7800 × 1000 × 2500mm
Dhogor ayaa dareemay giraangir
Bandhig dijitaal ah ayaa muujinaya dhumucda muraayadda iyo xawaaraha joojinta.